“Mɛtumi Agyina Onyankopɔn Ananmu Anaa?”—Yosef (Genesis 45)
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Arabic Armenian Aymara Bengali Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hindi Hmong (White) Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Maya Mixe Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Northern Puebla) Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Vietnamese Wallisian Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
“Mɛtumi Agyina Onyankopɔn Ananmu Anaa?”
NÁ Yosef gyina ne turo mu anwummere bi a anim rebiribiri. Ɛbɛyɛ sɛ na nnua ne nhwiren fɛfɛɛfɛ ne nnuaba a atwa hɔ ahyia ne nsuo a ɛda turo no mu no na na wagyene n’ani rehwɛ. Afei, sɛ ɔto n’ani a na ɔtumi hu Farao ahemfie no. Wo deɛ hwɛ sɛ Yosef gyina hɔ, na ɔte nea ɛrekɔ so wɔ ne fie nyinaa, te sɛ ne ba Manase a ɔregye ne nua ketewa Efraim agorɔ ma Efraim resereserew no. Ná Yosef bɛtumi de n’adwene abu sɛnea agorɔ a ne mma no redi no ama ne yere ani agye na ɔresereserew no. Ɔdwendwene weinom nyinaa ho a na n’ani agye ne tirim. Ná ɔtumi hu sɛ Onyankopɔn ahyira no!
Yosef too ne ba panin no din Manase, efisɛ edin no ase kyerɛ awerɛfi. (Genesis 41:51) Ɛda adi sɛ, sɛnea na Onyankopɔn ahyira Yosef saa bere no nti, na ne werɛ afi ɛyaw a ɔdii bere a ɔfirii fie na ɔne ne nuanom ne ne papa ntam tetee no. Ɔtan a na ne nuanom mpanimfoɔ no tan no no maa n’asetena sesaa koraa. Wɔyɛɛ no ayayade, na na wɔpɛ sɛ wɔkum no mpo, afei wɔtɔn no sɛ akoa maa aguadifo akwantufo bi. Efi saa bere no, ɔfaa ɔhaw bebree mu. Ɔyɛɛ akoa mfe pii, na afei ɔkɔwiee afiase; bere bi mpo deɛ wɔde nkɔnsɔnkɔnsɔn guu no. Nanso, seesei deɛ Yosef na oni oo; wabɛyɛ Farao a na ɔdi Egypt man a ɛwɔ tumi paa no so abadiakyiri! *
Afei deɛ, na Yosef abɛhu sɛ nea Yehowa aka no nyinaa reba mu. Mfe nson a wɔhyɛɛ ho nkɔm sɛ aduane bɛba Egypt no baa mu, na na Yosef na wɔde ahyɛ ne nsa sɛ ɔnhwɛ mma wɔmmoaboa aduane a abu so wɔ ɔman no mu no ano na wɔnkora so. Saa bere no, na ɔne ne yere Asenat awo mmarimaa mmienu. Nanso, na n’adwene taa kɔsi n’abusuafo a wɔwɔ akyirikyiri no so, ɛnkanka ne nua ketewa Benyamin a ɔdɔ no no, ne ne papa Yakob a ɔda ne koma so no. Ɛbɛyɛ sɛ na Yosef dwen wɔn ho sɛ biribiara rekɔ yie ma wɔn anaa. Ebia na ɔsan dwen ne nuanom mpanimfoɔ no ho sɛ wɔda so ara kura wɔn subammɔne no anaasɛ wɔasesa. Ɛbɛtumi aba nso sɛ, na ɔdwene nea ɔbɛtumi ayɛ de asiesie wɔn ntam na ama wɔatena ase asomdwoe mu ho.
Sɛ nitan, anibere, anaa ahoɔyaw ama asomdwoe atu ayera wɔ w’abusua mu a, ɛnde na w’asɛm reyɛ ayɛ sɛ Yosef deɛ no. Dɛn na yɛbɛtumi asua afi Yosef gyidi mu wɔ sɛnea ɔne n’abusuafo dii no mu?
“MONKƆ YOSEF NKYƐN”
Ná Yosef nni ne ho adagyew koraa, enti mfe pii twaa mu a wanhu. Sɛnea Yehowa nam dae so ka kyerɛɛ Farao sɛ aduane bɛba mfe nson na ɛno akyi ɔkɔm kɛse bɛba no, saa pɛpɛɛpɛ na ɛbae. Nnɔbae a wɔduae nyinaa sɛee! Ankyɛ na ɔkɔm te sii nsase a ɛbemmɛn Egypt no nyinaa so. Nanso sɛnea Bible ma yɛhu no, “na aduane wɔ Egypt asase so baabiara.” (Genesis 41:54) Ɛda adi sɛ, nsɛm a Onyankopɔn nam Yosef so kae ne ntotoe pa a Yosef yɛe no maa Egyptfo no ho tɔɔ wɔn.
Yosef ahobrɛase nti, Yehowa de no yɛɛ adwuma pii
Ɛbɛyɛ sɛ Egyptfo no ani sɔɔ nea Yosef yɛe no paa, na wɔkamfoo no wɔ ntotoe pa a ɔyɛe no ho. Sɛ wɔyɛɛ saa mpo a, anka Yosef rennye anuonyam no mma ne ho anaa obi foforo biara, na mmom ɔde bɛma Yehowa, ne Nyankopɔn no. Sɛ yɛwɔ ɔdom akyɛde bi na yɛbrɛ yɛn ho ase de saa akyɛde no yɛ adwuma wɔ Onyankopɔn som mu a, ɔno nso de yɛn bɛdi dwuma ama aboro yɛn ntease so.
Nanso ankyɛ, ɔkɔm no te sii Egyptfo no so. Enti nkurɔfo no su guu Farao so sɛ ɔmmoa wɔn, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔ Yosef nkyɛn. Deɛ ɔbɛka akyerɛ mo biara, monyɛ.” Enti Yosef buebuee adan a wɔakora aduane wom no, sɛnea ɛbɛyɛ a nkurɔfo bɛtumi atɔ dodow a wɔhia.—Genesis 41:55, 56.
Nanso nsase a ɛbemmɛn Egypt no deɛ, na ɔkɔm redosa wɔn. Yosef abusuafo a na wɔwɔ akyirikyiri wɔ Kanaan asase so no nso, na ɔkɔm rekum wɔn. Akwakoraa Yakob tee sɛ aduane wɔ Egypt, enti ɔsomaa ne mma mmarima no sɛ wɔnkɔ hɔ nkɔpɛ aduane mmra.—Genesis 42:1, 2.
Yakob somaa ne mma mmarima du nanso ne ba kumaa Benyamin deɛ wamma no ankɔ bi. Ná Yakob werɛ mfirii nea ɛsii bere a ɔsomaa ne ba Yosef a ɔdɔ no no nko ara sɛ ɔnkɔhwɛ ne nuanom mpanimfoɔ no. Ɛfiri saa bere no, Yakob anhu ne ba no bio. Ná Yakob dɔ ne ba Yosef paa ma enti ɔmaa no atade fɛfɛ bi. Bere a ne mma mpanimfoɔ no baa fie no, wɔde saa atade no brɛɛ wɔn papa; ná atete pasaa, na na mogya ayɛ mu nyinaa. Wɔmaa wɔn papa akwakoraa no gye dii sɛ aboa bi akyere Yosef awe, enti awerɛhow hyɛɛ no mã.—Genesis 37:31-35.
‘YOSEF KAEE DAEƐ A ƆSOEƐ NO’
Yakob mma no twaa kwantenten, na awiei koraa no wɔkɔduu Egypt. Bere a wɔbisaa baabi a wɔtɔn aduane no, wɔkyerɛɛ wɔn sɛ wɔnkɔhu ahemfie panin bi a ne din de Safenat-Panea. (Genesis 41:45) Wɔhuu no no, wɔhuu sɛ ɛyɛ Yosef anaa? Dabi. Wɔn deɛ, wɔfaa no sɛ Egypt tumfoɔ bi a wɔrekɔhwehwɛ ne hɔ mmoa. Enti bere a wɔn ani bɔɔ no so ara pɛ na ‘wɔkotoo no de wɔn anim butubutuu fam’ de kyerɛɛ sɛ wɔbu no paa.—Genesis 42:5, 6.
Na Yosef nso ɛ? Ɔno deɛ n’ani bɔɔ wɔn so ara pɛ na ɔhuu wɔn! Bio nso, bere a ɔhuu sɛ wɔrekoto no no, ɔkaee nea ɛsii bere a na ɔyɛ abarimaa no. Bible ka sɛ ‘afei Yosef kaee daeɛ a Yehowa ma ɔsoeɛ’ bere a na ɔyɛ abarimaa no. Ná daeɛ no kyerɛ sɛ, daakye ne nuanom bɛkoto no de wɔn anim abutubutu fam; ɛno ara na na anya ne mmamu no! (Genesis 37:2, 5-9; 42:7, 9) Dɛn na na Yosef bɛyɛ? Ɔbɛtew n’anim ama wɔn, na wayɛ wɔn atuu? Anaasɛ ɔbɛtua wɔn bɔne no so ka?
Yosef bɛhuu sɛ ɛmfa ho sɛnea ɔte nka biara no, ɛsɛ sɛ ɔhyɛ no ho so. Efisɛ nsɛm a na ɛresisi no nyinaa, na Yehowa nsa wom; ná ɛfa nea Yehowa bɛyɛ daakye ho. Ɔhyɛɛ bɔ sɛ ɔbɛma Yakob asefo ayɛ ɔman kɛse. (Genesis 35:11, 12) Nanso, sɛ na Yosef nuanom no da so kura wɔn atirimmuɔdensɛm, pɛsɛmenkominya ne atorodi no mu a, anka ɛbɛyɛ den sɛ Onyankopɔn atirimpɔw a ɛne sɛ ɔbɛma Yakob asefo ayɛ ɔman kɛse no bɛbam. Afei sɛ Yosef anni ne ho so a, ebia anka ɔbɛsɛe asomdwoe kakra a ɛwɔ fie no na akɔfa asɛm abrɛ ne papa ne ne nua Benyamin. Sɛ wɔte ase mpo a na ɔnnim. Yosef anyi ne ho adi ankyerɛ ne nuanom no sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛhu sɛ wɔasakra anaa wɔnsakrae. Ná ɛno bɛma wahu sɛnea Yehowa pɛ sɛ ɔne wɔn di.
Ebia worenhyia nea ɛtoo Yosef no bi da wɔ w’asetena mu, nanso ɛnnɛ nitan ne mpaepaemu ahyɛ mmusua mu mã. Sɛ yɛhyia biribi a ɛte saa a, yɛbɛdi yɛn koma akyi na yɛayɛ nea yɛpɛ? Ɛyɛ papa sɛ yɛsuasua Yosef na yɛhu sɛnea Onyankopɔn pɛ sɛ yɛyɛ yɛn ade. (Mmebusɛm 14:12) Kae sɛ, ɛwom sɛ ɛho hia sɛ yɛma asomdwoe tena yɛne yɛn abusuafo ntam deɛ, nanso nea ɛhia kɛse paa ne sɛ yɛbɛma asomdwoe atena yɛne Yehowa ne ne Ba no ntam.—Mateo 10:37.
‘MƐSƆ MO AHWƐ’
Yosef yɛɛ nneɛma pii de sɔɔ ne nuanom hwɛe sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛhu nea ɛwɔ wɔn komam ankasa. Yosef teateaa wɔn na ɔbɔɔ wɔn sobo sɛ wɔyɛ akwansrafo; ɔrekasa no nyinaa na obi rekyerɛ ase. Ne nuanom no nso yii wɔn ho ano, na wɔkaa wɔn abusua no ho asɛm nyinaa kyerɛɛ no, na mpo wɔkaa sɛ wɔn nua kumaa baako da so ara wɔ wɔn kurom. Yosef tee saa no n’ani gyei, nanso wamma ne nuanom no anhu. Ebia ɔbisaa ne ho sɛ, ‘Enti me nua kumaa no da so te ase?’ Afei deɛ na Yosef ahu nea ɔbɛyɛ. Ɔkaa sɛ: “Deɛ mede bɛsɔ mo ahwɛ nie,” enti ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ ɔpɛ sɛ ɔhu wɔn nua kumaa no. Akyiri yi, ɔmaa wɔn kwan sɛ wɔnsan nkɔ wɔn kurom nkɔfa wɔn nua kumaa no mmra nanso gye sɛ wɔagya wɔn mu baako wɔ afiase hɔ.—Genesis 42:9-20.
Afei ne nuanom no fii ase kasakasae na wɔbobɔɔ wɔn ho sobo wɔ adebɔne a wɔyɛe bɛyɛ 20 a atwam ni no ho, nanso na wɔnnim sɛ Yosef te wɔn kasa no. Wɔkaa sɛ: “Ampa ara, yɛn nua no ho asodie da yɛn so, ɛfiri sɛ yɛhunuu sɛ ne kra rebrɛ, nanso berɛ a ɔsrɛɛ sɛ yɛnhu no mmɔbɔ no yɛantie. Yei nyinaa nti na yɛrehunu amane yi.” Yosef tee nea na wɔreka no nyinaa, na ɔfirii wɔn nkyɛn kɔsuiɛ, na wamma wɔanhu. (Genesis 42:21-24) Nanso, na ɔnim sɛ sɛ wɔanu wɔn ho paa a, ɛnyɛ wɔn ano kɛkɛ na wɔde bɛka. Enti ɔsan yɛɛ biribi de sɔɔ wɔn hwɛe.
Ɔfaa Simon de no too afiase, na ɔgyaa nkae no kwan ma wɔkɔe. Ɔsan nso de obiara sika hyɛɛ ne kotoku mu. Yakob mma yi siim kɔduu fie, na akyiri yi wɔsrɛɛ Yakob sɛ ɔmma wɔmfa ne ba Benyamin a ɔdɔ no no nka wɔn ho nkɔ Egypt, nanso wɔka brɛe ansa na ɔrepene so. Bere a wɔduu Egypt no, wɔkaa sika a wɔhuu wɔ wɔn kotoku mu no ho asɛm kyerɛɛ Yosef akoa no, na wɔkaa sɛ, wɔde sika no nyinaa aba. Nea wɔyɛe no kaa Yosef koma, nanso na Yosef pɛ sɛ ɔhu wɔn suban ankasa. Ɔtoo pono maa wɔn, na wamma wɔanhu sɛ Benyamin a wahu no no ama n’ani agye. Afei, ɔsan hyehyɛɛ aduane wɔn nkotoku mama, na ɔgyaa wɔn kwan maa wɔkɔɔ wɔn kurom. Nanso saa bere yi deɛ ɔde dwetɛ kuruwa hyɛɛ Benyamin kotoku mu.—Genesis 42:26–44:2.
Afei deɛ na Yosef anya wɔn! Ɔmaa wɔtĩĩ ne nuanom no kɔkyeree wɔn, na wɔbɔɔ wɔn sobo sɛ wɔawia ne kuruwa. Wɔhwehwɛɛ wɔn nneɛma mu no, wɔhuu wɔ Benyamin kotoku mu, enti wɔsan de mmarima no nyinaa brɛɛ Yosef. Afei na Yosef anya nea ɔbɛgyina so de ahu ampa sɛ ne nuanom no asesa anaa. Yuda gyinaa ne nuanom ananmu kasae. Ɔsrɛɛ sɛ ɔnhu wɔn mmɔbɔ, na ɔkaa mpo sɛ nnipa 11 no nyinaa bɛyɛ nkoa wɔ Egypt. Nanso, Yosef kaa sɛ Benyamin nko ara na ɔbɛyɛ akoa wɔ Egypt, na wɔn a wɔaka no nsan nkɔ wɔn kurom.—Genesis 44:2-17.
Yuda kaa nsɛm a ɛka koma. Ɔkaa sɛ: “Ne nua a ɔne no firi maame baako no awu agya no, na ne papa dɔ no.” Ɛbɛyɛ sɛ saa nsɛm no pusuu Yosef paa. Ná Yosef yɛ Yakob yere Rahel a ɔdɔ no no abakan, na bere a ɔrewo Benyamin no na ɔwuiɛ. Ɛda adi sɛ sɛnea na Yakob ani gyina ne yere Rahel no, saa ara nso na na Yosef ani gyina ne maame. Esiane sɛ na wɔyɛ yafunu baako mma nti, na Benyamin da Yosef koma so paa.—Genesis 35:18-20; 44:20.
Yuda kɔɔ so srɛɛ Yosef sɛ mma ɔmmfa Benyamin nnyɛ akoa. Ɔkaa mpo sɛ, Benyamin bɛyɛ akoa deɛ, ɔno mmom bɛyɛ akoa. Enti ɔkaa saa awerɛhosɛm yi: “Sɛ abɔfra no nka me ho a, mɛyɛ dɛn akɔ me papa nkyɛn na mahwɛ me papa amanehunu?” (Genesis 44:18-34) Asɛm a Yuda kae no maa Yosef huu sɛ wasesa ampa. Yuda daa no adi sɛ wanu ne ho ankasa, na afei nso wanya tema ne mmɔborɔhunu, na ɔdwen afoforo ho.
Yosef huu sɛ ne nuanom no anu wɔn ho wɔ bɔne a wɔyɛ tiaa no no ho
Afei na Yosef ntumi nhyɛ ne ho so bio. Ná ɛsɛ sɛ ɔda ne ho adi. Enti ɔpamoo ne nkoa no nyinaa fii ne nkyɛn, na ɔmaa ne nne so suu denneennen maa wɔn a na wɔwɔ Farao ahemfie hɔ no mpo tee. Awiei koraa no ɔdaa ne ho adi, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mene mo nua Yosef.” Asɛm no tɔɔ ne nuanom no so araa ma na wɔnhu nea wɔnka mpo. Afei Yosef yɛɛ wɔn atuu na ɔde wɔn bɔne nyinaa kyɛɛ wɔn. (Genesis 45:1-15) Ɔdaa Yehowa su bi adi, ɛne sɛ ɔyi ne yam de bɔne firi. (Dwom 86:5) Yɛn nso, yɛde bɔne firi anaa?
Yosef fie hɔ yɛɛ gyegyeegye, na bere a Farao tee nea asi nyinaa no, ɔmaa Yosef kɔfaa ne papa akwakoraa no ne n’abusuafo nyinaa baa Egypt. Ankyɛ koraa, Yosef na afei wahyia ne papa a ɔdɔ no yi! Bere a Yakob huu ne ba no ɔsuiɛ, na ɔkaa sɛ: “Afei a mahunu w’anim sɛ wote aseɛ yi deɛ, mewu a mepɛ.”—Genesis 45:16-28; 46:29, 30.
Ɛno akyi no, Yakob tenaa Egypt mfe 17 ansa na ɔrewu. Ɔtenaa ase kyɛe kakra maa ɔtumi hyiraa ne mma mmarima 12 no. Ɔhyiraa Yosef a na ɔyɛ ne ba a ɔtɔ so 11 no mmɔho; abakan na na wɔtaa hyira wɔn saa. Israel mmusuakuw mmienu na na wɔbɛfiri ne mu aba. Na Yuda a ɔyɛ Yakob ba a ɔtɔ so nnan no nso ɛ? Ɔkyerɛɛ sɛ wanu ne ho paa, na ɛma ɔbɛdaa nsow wɔ ne nuanom mu. Ɛno nti, ɔnyaa nhyira kɛse: Ná Mesia a ɔbɛba no bɛfiri n’abusua mu!—Genesis ti 48 ne 49.
Yakob wui no, na wadi mfe 147. Bere a wɔn papa wui no, Yosef nuanom no bɔɔ hu sɛ anhwɛ a wɔn nua a wabɛyɛ nipa kɛse a ɔwɔ tumi no bɛtua wɔn bɔne no so ka. Nanso, Yosef kaa wɔn koma too wɔn yam. Bere nyinaa na asɛm a Yosef ka ne sɛ, Yehowa na wama abusua no nyinaa abɛpue Egypt, enti ɛnsɛ sɛ wɔma nea ɛsii no teetee wɔn. Afei ɔbisaa asɛm a ɛka koma yi: “Mɛtumi agyina Onyankopɔn ananmu anaa?” (Genesis 15:13; 45:7, 8; 50:15-21) Yosef huu sɛ Yehowa nko ara na ɔbu atɛntrenee. Na sɛ Yehowa de wɔn bɔne akyɛ wɔn a, ɔno Yosef ne hwan sɛ ɔbɛtwe wɔn aso?—Hebrifoɔ 10:30.
Ɛtɔ da a ɛyɛ den ma wo sɛ wode bɔne bɛkyɛ? Sɛ obi hyɛ da yɛ yɛn bɔne a, ɛtumi yɛ den paa sɛ yɛde bɛkyɛ no. Nanso sɛ yɛfi yɛn komam de obi a wanu ne ho paa bɔne kyɛ no a, yɛne nea wanu ne ho no nyinaa nya so mfaso. Yɛyɛ saa a, yɛbɛkyerɛ sɛ yɛresuasua Yosef ne n’Agya Yehowa a ɔde bɔne kyɛ no.
^ nky. 4 Hwɛ asɛm a wɔato din “Suasua Wɔn Gyidi” a ɛwɔ August 1, 2014; November 1, 2014; ne February 1, 2015, Ɔwɛn-Aban mu no.